“ဝေ ဝေ ကိုကြိုဆိုခြင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ဝေ ဝေ ကိုကြိုဆိုခြင်း”	18
“ဝေ ဝေ ကိုကြိုဆိုခြင်း”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 2, 2015 in Creative Writing, Poetry | 18 comments
“ဝေ” တို့ အရွယ်ဆိုတာ
မှန်း ဆ လို့ မရတဲ့အဆုံး
“ဒီတစ်ည တော့ ပျော်အောင်အိပ်စက်
မရဲ တရဲ လေး
မြစပဲရိုး says: . ဝေဝေ ရဲ့ မွေးနေ့လား ကပေါက်ကြီး။
A Very Happy Birthday My Dear Sis !
May all your dreams come true. (If you want to ).
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ကြီးက သတိမေ့ နေတာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မွေးနေ့ မှာ မြိးရှည်း ကျွေးခဲ့တာလေ
Ma Ma says: July ဆိုတော့ ဝေေ၀့မွေးနေ့မဟုတ်လောက်သေးဘူး။
ကိုပေါက်ပြောတဲ့ ဝေ ဆိုတာ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။
၀ှက်ဖဲလေး ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်မယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မမ က မျက်စေ့ လည်သွားတယ်ပေါ့
ဖေစ်ဘုတ်မှာ ကတည်းက သတိထားမိရမှာ
Alinsett @ Maung Thura says: .ခြောက်ဆယ် ခြောက်ဆယ် (မြန်မာပြည်ရဲ့ ပင်စင်အရွယ်)ကို ကြိုဆိုခြင်း နေမှာ…
. မြန်မာစာနဲ့ ဝေဝေဆိုတာက အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ 6060နဲ့
မကွာရေးချ မကွာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အလင်းဆက်တော်တယ်
ကျနော်ကို ဒီ စာလုံးလေးရအောင် သင်ပေးသွားတာ ဟဲဗီးဖြိုးလေ
လေဆာ ကို ခြောက်လစာ လို့ ဖတ်ပြသွားတာ
Mike says: .ကဗျာဖတ်ပြီး မျက်စေ့လည်သွားတယ်…ရွာထဲက မဝေကိုညွှန်းတယ်မှတ်တာ..
.ကျုပ်တို့ကုမ်ပဏီကတော့ ပင်ဆင်သက် ၅၅ နှစ်တဲ့ဗျာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုမိုက်ရေ အသက်နဲ့ ပင်စင်ဖြတ်တာတော့ ကျနော်လဲ သဘောမကျ
ဒါကြောင့် ကိုခိုင်ကော်မင်းကို စိမ်းပေးလိုက်တယ်
မြစပဲရိုး says: ယုံပါဘူး ဝေ။
၅၀လောက်တောင် မရှိသေးတာကို။ :-)))
kai says: ယူအက်စ်က.. တင်ရင်းတင်ရင်း.. ပင်စင်သက် ၆၇နှစ်ရောက်နေပြီ…။
မြန်မာပြည်များ.. အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေ ဘာမှဒီလောက်ရှိတာမဟုတ်..
ကျမ်းမာရေးအာမခံလည်းဘာမှလောက်လောက်လားလားမရှိသမို့.. တိုင်းပြည်က စိုက်စရာဒီလောက်မရှိ..။
လူထုက စားဝတ်နေရေးထောက်ပံ့ထားရတဲ့ လူတန်းစားကိုတော့.. ၆၀လောက်ဆို ပင်စင်ပေးသင့်တယ်..။
အခုက.. ကြီးလေလေ.. လူထုပိုထောက်ပံ့ရလေလေ.. ။ အဦးအဖျားတွေစားရသမို့.. အသက်တွေကရှည်…။
နေမကောင်းလည်း.. ဆေးတောင်.. နိုင်ဂျံဂါးမှာ ကုချင်ကြဆိုတော့.. ဒီတိုင်းပြည်မမွဲ.. ခံနိုင်ပါ့…။
aye.kk says: ဝေရောက်ဖို့အတွက်ေ,ပဲလိုတော့တယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အမအေး ရေ
အမအေးလို သွက်လက်ဖြတ်လတ်ပါ့မလားလို့ တွေး ပြီး စိတ်ပူမိပါတယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီနေ့က ကျနော်မွေးနေ့ပါ
အမှတ်တရ ပြောရရင် 2011 မွေးနေ့ မတိုင်ခင်တစ်ရက်
ဆူး တို့ နဲ့ ကျနော်တို့ လင်မယား ခရီးတွေသွားဘူးကြတယ်
နောက်လာမယ် သုံးနှစ်ဆိုရင် ကျနော် အသက် ခြောက်ဆယ်ရောက်ပြီ
ကျနော်နဲ့ သက်တူ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေ အရာရှိတွေ သူတို့ နဲ့ ဆုံတဲ့အခါ
မကြာခင်လာတော့ မယ့် အသက်ခြောက်ဆယ် ဆိုရင် ပင်စင်ယူရမှာကိုတွေးပြီး စိတ်ပူပန်နေကြပါတယ်
အဲဒါလေးကို သတိရလို့ ဒီကဗျာလေးကိုရေးဖြစ်တာပါ
ဖေစ်ဘုတ်မှာတော့ ကျနော်မွေးနေ့ ကို မနေ့ ကတည်းက ဆုတောင်းတွေနဲ့ကျင်းပကြတာ ပျော်စရာကြီးပါဘဲ
ရာမည says: ဟုတ်တယ်ဦးလေးရ
၆၀ နီးပေမယ့် ၆၀ မတိုင်မီသေသွားနိုင်လို့
ဦးလေး မရှိရင် မန်းတလေးဂေဇက်မှာ
တောင်သမန်ပုံတွေ တိမ်ပုံတွေ မကြည့်ရတော့ဘူးခင်ဗျ
​ဒေါ် လေး says: ကိူပေါက်ရဲ့စာလေးက ကောင်းလိုက်တာ
ဒီထက်ဒီထက် အသက်ရှည်ပြီး စာတွေရေးနိုင်ပါစေ
အသက်ရှည်ခြင်း မရှည်ခြင်းက တော့ ကံနဲ့လဲ ဆိုင်
ဥာဏ်နဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ် ဒေါ်လေးရေ
မသေချင်သေးတော့ ကံနဲ့ဥာဏ် နဲ့ တွဲပြီး အသက်ရှင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်
ကျနော့်ရိုက်ချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခွင့်ရနေတာကလဲ
ကျနော့် အတွက် ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တွေပါဘဲ။
တောင်ပေါ်သား says: မကြိုချင်ပေမယ့်လည်း လာကိုလာမယ့် ဝေဝေပေါ့ ၊
ကျနော်တို့လည်း အသက်ရှည် အနာကင်းဖို့ ကြိုးစားရဦးမှာပါ ကိုပေါက်ရေ
ကျနော်က သာ အပြင် လုပ်ငန်းလုပ်လို့ 60ကို ထည့် မစဥ်းစားပေမယ့်
အစိုးရအလုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက တော့ ပင်စင်ယူပြီးရင်ဆိုတာကို ထည့် တွေးနေကြ ရ ပြီလေ